မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဒရုန်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် (အင်္ဂလိပ်: Unmanned aerial vehicle) သည် အရပ်စကား ဒရုန်း (အင်္ဂလိပ်: drone) ဟူသောအမည်ဖြင့် လူသိများသော လေယာဉ်တမျိုးဖြစ်ပြီး ပိုင်းလော့ခေါ် လေယာဉ်မှူးမှ တက်မောင်းစရာ မလို။ ဒရုန်းများသည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စနစ်၏ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်ဆက်သွယ်ရန် မြေပြင်ထိန်းချုပ်စက်နှင့် တွဲသုံးရသည်။ ယင်းသို့ ထိန်းချုပ်ရန်မူ လူသားစက်ကိုင်ကို သုံးသဖြင့် လေယာဉ်မောင်းအဝေးထိန်းလေယာဉ် (remotely-piloted aircraft) လည်း ခေါ်သည်။ သို့သော် ထိန်းသည်ဆိုခြင်းမှာလည်း အစားစားရှိပြီး လူက ကြားဝင်ထိန်းစရာမလိုသည့် အလွန်အဆင့်မြင့်သောအဆင့်များအထိ ရှိ၏။ 
မူလက ၂၀ ရာစု စစ်ရေးစစ်ရာကိစ္စများတွင် လူမှာ အရေးပါသော စစ်ဘက်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာသဖြင့် လူသားတို့သွားရန် မသင့်သော အလင်းအားနည်း ညစ်ပတ်လွန်း အန္တရာယ်များသည့် နေရာများကို စေလွှတ်ရန် မျှော်မှန်းတီထွင်ခဲ့သည်။  နည်းပညာမြင့်လာပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကျဆင်းလာခြင်းကြောင့် စစ်ဘက်မဟုတ်သောအသုံးများပါ ရှိလာသည်။ ယင်းတို့တွင် ဝေဟင်ဓာတ်ပုံပညာ၊ ထုတ်ကုန်ဖြန့်ဝေရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေး၊ အဆောက်အဦစစ်ဆေးရေး၊ သိပ္ပံ၊ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းနှင့် ဒရုန်းပြိုင်ပွဲတို့အထိ ဖြစ်သည်။ 
↑ Cary, Leslie; Coyne, James. "ICAO Unmanned Aircraft Systems (UAS), Circular 328 Archived4March 2016 at the Wayback Machine.". 2011-2012 UAS Yearbook - UAS: The Global Perspective (PDF). Blyenburgh & Co. pp. 112–115.
↑ "Drones smuggling porn, drugs to inmates around the world". 17 April 2017.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်&oldid=722149" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။